I-China yomgangatho ophezulu-ubungqina benethi abavelisi behoseyili, inkxaso kubenzi bokwenza ngokwezifiso kunye nababoneleli | Kede Netting
Umgangatho ophezulu we-net-proof net abavelisi bevenkile, inkxaso yokwenza ngokwezifiso
Umnatha wokuthintela uthuli, iinaliti ze-1.5, iinaliti ze-2,5, iinaliti ezi-3, iinaliti ezi-4, iinaliti ezi-6 kunye nezinye iinaliti ezininzi zokuzikhethela, kwaye ziyakwazi ukumelana nokukhanya kwelanga kunye nemozulu. Ixabiso lemveliso yentengiso ngokuthe ngqo, iisampuli zamahhala. Umzi-mveliso othe ngqo kwi-wholesale-proof inet ngaphezulu kweminyaka engama-60, uxhasa ukwenziwa kweesampulu kunye nemizobo.
Umnatha wokuthintela uthuli, iinaliti ze-1.5, iinaliti ze-2,5, iinaliti ezi-3, iinaliti ezi-4, iinaliti ezi-6 kunye nezinye iinaliti ezininzi zokuzikhethela, kwaye ziyakwazi ukumelana nokukhanya kwelanga kunye nemozulu. Ixabiso lemveliso yentengiso ngokuthe ngqo, iisampuli zamahhala. Umzi-mveliso othe ngqo kwi-wholesale-proof inet ngaphezulu kweminyaka engama-60, uxhasa ukwenziwa kweesampulu kunye nemizobo. Wamkelekile abathengi kunye nabasasazi abavela kwihlabathi liphela ukuza kudibana kunye nokuhlola. Umnatha wokuthintela uthuli oveliswa ngumzi-mveliso wethu ubukhulu becala uluhlaza, ubungakanani obuqhelekileyo buyi-4-8m ububanzi, kwaye ubude buyi-30-100m. Ingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi.
Iinethi ezithintela uthuli zikwabizwa ngokuba “ziindonga zokuthintela umoya kunye nokuthintela uthuli” kunye “neendonga zokuthintela umoya”. Iminatha yokuthintela uthuli isetyenziselwa kakhulu ukukhusela umoya kunye nothuli kwizityalo zokugcina amalahle kwimigodi yamalahle, izityalo ze-coking, izityalo zamandla, njl.; amazibuko, iindawo zokugcina amalahle kunye nezinye iiyadi zembewu; ukunyanzeliswa kothuli kwiiyadi ezahlukeneyo ezivulekileyo zentsimbi, izixhobo zokwakha, isamente kunye namanye amashishini; imo engqongileyo engqongqo efana nemozulu engangeni moya kunye nemozulu ekhusela uthuli kwizityalo; koololiwe, oohola bendlela, iiyadi zokugcina amalahle, iziza zokwakha, uthuli lwendlela, oohola bendlela, njalo njalo. Linda. Ixesha eliqhelekileyo lokuhambisa liyi-30-40 iintsuku emva kokuqinisekiswa komyalelo, kwaye ixesha elithile linokuxoxisana kunye nokunxibelelana. Iimveliso zithunyelwa ngokubanzi eJapan, eUnited States, eYurophu, eMzantsi-mpuma Asia nakwamanye amazwe kwaye zamkelwa kakuhle.
Ukusinda okushiyekile 10g-50g/㎡
Umnatha 1.5-pin, 2.5-pin, 3-pin, 4-pin, 6-pin
Webmaster (30-100m) ingenziwa ngokwezifiso ngokuhambelana nabathengi
Ububanzi bomnatha (4m-8m) ingenziwa ngokwezifiso ngokuhambelana nabathengi
Izinto eziphathekayo Izinto ezintsha ze-HDPE
UV Ngokweemfuno zemveliso
Uhlobo Ukunitha kweWap
Ixesha lokuzisa 30-40 iintsuku emva kokuqinisekisa umyalelo
Imarike yokuthumela ngaphandle Japan, USA, Europe, Southeast Asia
Uhlobo lokuhlawula T/T, L/C
Unikezelo lwamandla 200T ngenyanga
Iphakheji Ingxowa elukiweyo okanye iplastiki
Ngaphambili: Umvelisi ochwephesha weminatha echasene nesichotho ekumgangatho ophezulu
Okulandelayo: Umenzi wesikrini sesinambuzane esikumgangatho ophezulu
Anti Bird Net For Agriculture
Anti Bird Net Kuba Balcony
I-Anti Bird Netting